Tantaram-piainana: Niezaka Nanahaka An’​ireo Modely Tsara Aho
Ny Tilikambo Fiambenana—Fianarana | Oktobra 2016
HAMAKY AMIN'NY TENY Acholi Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bashkir Bassa (Cameroun) Bengali Bicol Boligara Boulou Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Cinghalais Cinyanja Dangme Danoà Digor Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Fon Frantsay Ga Galoà Goujrati Goun Grika Guarani Géorgien Haoussa Hebreo Hiligaynon Hindi Holandey Hongroà Ibanag Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Isoko Italianina Japoney Kabiyè Kannada Kikamba Kikaonde Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Koreanina Kroaty Kurde Kurmanji (Caucase) Kurde Kurmanji (Sirilika) Kwangali Kwanyama Lamba Letonianina Lhukonzo Lingala Litoanianina Luganda Lunda Luo Luvale Malagasy Malayalam Malezianina Mambwe-Lungu Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Marathe Masedonianina Maya Mbunda Mingrelian Mixe (Afovoany) Mongol Mooré Myama Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Norvezianina Nzema Népali Okpé Oromo Ossète Otetela Ourdou Ouzbek Pangasinan Papiamento (Curaçao) Pendjabi Persianina Pidgin (Cameroun) Pidgin Nizerianina Pidgin any Amin'ny Nosy Salomon Poloney Portogey (Brezila) Quechua (Bolivia) Romanianina Rosianina Runyankore Samoanina Sango Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sidama Silozi Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Swahili (Congo) Swati Tagalog Tailandey Tajiki Tamoul Tatar Tchouvache Tenin’ny Tanana Angoley Tenin’ny Tanana Aostralianina Tenin’ny Tanana Indianina Tenin’ny Tanan’ny avy any Afrika Atsimo Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tiv Tok Pisin Tseky Tsonga Turkmène Tuvalu Twi Tzotzil Télougou Urhobo Venda Vietnamianina Waray-Waray Wolaita Xhosa Yorobà Zandé Zapoteky (Andilan-tany) Zoloa Éwé
Niezaka Nanahaka An’​ireo Modely Tsara Aho
Notantarain’i Thomas McLain
Nitelefaonina an’ahy tany Colorado i Izak Marais avy any Patterson, any New York. Niresaka teo izahay, dia nanontany aho hoe: “Mba fantatrao moa hoe firy taona aho?” Namaly izy hoe: “Fantatro tsara ka!” Aleo hotantaraiko ny nahatonga an’izany resaka izany.
TERAKA tany Wichita, atỳ Etazonia, aho tamin’ny 10 Desambra 1936. Izaho no zokiny indrindra aminay efatra mianadahy. William no anaran’ny dadanay ary Jean ny an’ny mamanay. Tena tia nanompo an’i Jehovah izy ireo, ary i Dada no mpikarakara ny fiangonana (anti-panahy mpandrindra). Emma Wagner no anaran’ny bebenay avy amin’i Mama. Be dia be ny olona nampianariny Baiboly, anisan’izany i Mama sy Gertrude Steele. Lasa misionera tany Porto Rico i Gertrude, tatỳ aoriana. * Maro àry ny modely azoko notahafina.
NAHITA MODELY TSARA
Dada, nizara gazety teny amin’​ny sampanan-dalana
Niaraka tamin’i Dada aho indray asabotsy hariva, tamin’izaho dimy taona. Nizara gazety Tilikambo Fiambenana sy Fampiononana (Mifohaza!) teny an-dalana izahay. Nangotraka ny Ady Lehibe II tamin’izany. Nisy dokotera mamo be nandalo, dia nanompa an’i Dada satria tsy nanao miaramila izy. Saro-tahotra, hono, i Dada dia mamorona antony tsy handehanana miady fotsiny. Nanatona akaiky kely an’i Dada izy, dia nanatrika azy tsara sady niteny hoe: “Asio aho raha sahy ialahy e! Kanosa!” Natahotra aho nefa tiako be koa ny nataon’i Dada. Tsy namaly mantsy izy, fa nizarany gazety daholo fotsiny ny olona nitangorona teo. Nisy miaramila nandalo tamin’izay, dia nitabataba be ilay dokotera hoe: “Sazio any io kanosa lahy io!” Hitan’ilay miaramila anefa hoe mamo izy, ka hoy izy taminy: “Mandehana mody mandra-pisavan’ny toakanao.” Dia samy lasa izy roa lahy. Tena faly aho fa nanampy an’i Dada ho be herim-po i Jehovah. Nanana trano roa fanetezam-bolo tany Wichita izy, ary mpankao aminy ilay dokotera.
Niaraka tamin’​i Dada sy Mama hanatrika fivoriambe tany Wichita, tamin’​ny 1940 tany ho any
Namidin’i Dada sy Mama ny tranonay sy ireo trano fanetezam-bolo, tamin’izaho valo taona. Nanamboatra tranofiara kely ry zareo, dia nanitatra tany akaikin’i Grand Junction, any Colorado izahay. Nanao mpisava lalana i Dada sy Mama, ary namboly sy niompy no nataony asa tapa-potoana. Nazoto be ry zareo sady notahin’i Jehovah ka lasa nisy fiangonana tao an-tanànanay. Nataon’i Dada batisa tany amin’ny renirano kely tany an-tendrombohitra aho tamin’ny 20 Jona 1948. Nisy olon-kafa natao batisa koa tamin’izay, anisan’izany i Billie Nichols sy ny vadiny. Nanao ny asan’ny faritra ry zareo tatỳ aoriana, ary nanao an’izany koa ny zanany lahy sy ny vadiny.
Nana-namana be dia be nifantoka tamin’ny fanompoana izahay. Ry Steele mianakavy no tena akaiky anay, izany hoe i Don sy Earlene, Dave sy Julia, ary Si sy Martha. Matetika izahay no nifampahery sy niresadresaka momba ny Baiboly. Nisy vokany be tamiko ny fiarahana tamin’ireo mpivady ireo. Hitako tamin’ny fiainan-dry zareo hoe faly sy afa-po isika, rehefa manao an’ilay Fanjakana ho loha laharana.
NIFINDRA INDRAY IZAHAY
Nana-namana atao hoe Bud Hasty izahay. Notaominy hiaraka hanao mpisava lalana taminy tany amin’ny faritra atsimon’i Etazonia aho, tamin’izaho 19 taona. Tany Ruston, any Louisiane, no nanirahan’ny mpiandraikitra ny faritra anay. Betsaka Vavolombelona lasa tsy nitory intsony mantsy tany. Nilaza izy fa tokony hatao ny fivoriana rehetra isan-kerinandro, na firy na firy ny mpanatrika. Nahita trano izahay, dia namboarinay tsara ilay izy mba hivoriana. Nivory foana izahay, na dia izahay roa lahy irery aza no tonga nandritra ny fotoana elaela. Nifandimby nanao ny anjara izahay, ka ny iray no namaly ny fanontaniana rehetra. Rehefa nisy fampisehoana, dia nataonay ilay izy, dia tsy nisy mpanatrika! Nisy anabavy zokiolona iray tonga ihany anefa tatỳ aoriana. Nivory koa ny olona sasany nampianarinay sy ny sasany tamin’ireo tsy nitory intsony. Tsy ela izahay dia lasa fiangonana nandroso be.
Nitory tamin’ny pasiteran’ny Fiangonan’i Kristy izahay sy Bud, indray mandeha. Niresaka andinin-teny mbola tsy haiko ilay pasitera. Nahatonga saina ahy ny resany, ka lasa nisaintsaina lalina momba ny zavatra inoako aho. Niari-tory herinandro aho nikaroka ny valin’ny fanontaniany. Nanampy ahy hifandray kokoa tamin’i Jehovah izany. Lasa tsy andriko izay hahitana pasitera hafa!
Nasain’ny mpiandraikitra ny faritra nifindra tany El Dorado, any Arkansas, aho tsy ela taorian’izay, mba hanampy ny fiangonana tany. Nivezivezy tany Colorado aho tamin’izaho tany, mba hotsaraina miaramila. Nandeha tamin’ny fiarako izaho sy ny mpisava lalana maromaro, indray mandeha. Nanao aksidà tany Texas anefa izahay, dia potika tanteraka ny fiarako. Nitelefaonina rahalahy iray izahay, dia tonga izy. Nentiny tany an-tranony izahay, ary avy eo tany am-pivoriana. Nampandrenesina tao am-pivoriana ny nahazo anay. Tsara fanahy be ny mpiara-manompo dia nanome vola anay. Namidin’ilay rahalahy ny fiarako dia lafony 25 dolara.
Nisy nitondra anay hatrany Wichita avy eo. Mpisava lalana tany ny Rahalahy McCartney. Naman’ny fianakaviako izy ary “Doc” no fiantsoanay azy. Manan-janaka kambana roa lahy atao hoe Frank sy Francis izy, ary mbola namako be ry zareo hatramin’izao. Nanana fiara efa tonta ry zareo, dia namidiny 25 dolara tamiko. Nitovy vidy tamin’ilay fiarako simba mihitsy ilay izy! Tamin’izay aho vao tena nahatsapa hoe nomen’i Jehovah an’izay nilaiko satria nanao loha laharana an’ilay Fanjakana. Nampahafantarin-dry zareo an’i Bethel Crane aho tamin’izay. Anabavy tena mahafinaritra izy. Vavolombelona nafana fo tany Wellington, any Kansas, ny mamany. Mpisava lalana foana izy na dia efa 90 taona mahery aza. Nivady izaho sy Bethel herintaona latsaka taorian’izay, tamin’ny 1958, ary nanao mpisava lalana tany El Dorado.
FANASANA TSY NAMPOIZINA
Te hanahaka an’ireny modely hitanay tamin’ny mbola kely ireny izahay, ka nanapa-kevitra fa hanaiky foana an’izay asain’ny fandaminana hataonay. Nanaiky àry izahay rehefa voatendry ho mpisava lalana manokana tany Walnut Ridge, any Arkansas. Faly be koa izahay satria nasaina hanatrika ny Sekolin’ny Gileada, kilasy faha-37, tamin’ny 1962. Vao mainka faly izahay satria niray kilasy tamin’i Don Steele. Voatendry nankany Nairobi, any Kenya, izaho sy Bethel rehefa nahazo diplaoma. Nalahelo be izahay rehefa niala tany New York. Faly anefa izahay rehefa nahita an’ireo mpiara-manompo nitsena anay tao amin’ny seranam-piaramanidin’i Nairobi.
Nitory niaraka tamin’​i Mary sy Chris Kanaiya, tany Nairobi
Vetivety izahay dia tamana tany Kenya, sady tianay ny nanompo tany. I Chris sy Mary Kanaiya no mpianatray voalohany nandroso tsara. Mbola manompo manontolo andro any ry zareo izao. Nasaina nifindra tany Kampala, any Ogandà, izahay herintaona taorian’izay. Izahay no misionera voalohany tany. Nahafinaritra tamin’izany satria be dia be ny olona nazoto nianatra Baiboly sy lasa Vavolombelona. Nanan-janaka anefa izahay dia nody tatỳ Etazonia, telo taona sy tapany taorian’ny nanompoanay tany Afrika. Mbola nalahelo kokoa noho ny tamin’ny niala tany New York izahay rehefa niala tany. Lasa tianay be mantsy ny olona tany Afrika, ary nanantena ny hiverina tany izahay.
NAHAZO ANDRAIKITRA VAOVAO
Nifindra tany amin’ny faritra andrefan’i Colorado izahay, tany amin’ny nisy an’i Dada sy Mama. Teraka i Kimberly vavimatoanay tsy ela taorian’izay. Teraka koa i Stephany, herintaona sy dimy volana taorian’izay. Andraikitra vaovao ilay hoe mitaiza, ary tsy nataonay kitoatoa mihitsy. Niezaka izahay nampianatra ny fahamarinana azy roa vavy. Te ho modely ho azy ireo koa izahay, hoatran’ny modely hitanay tamin’ny mbola kely. Fantatray mantsy fa misy heriny lehibe eo amin’ny ankizy ny modely hitany. Tsy midika anefa izany hoe tsy maintsy hanompo an’i Jehovah izy ireo. Ny zandriko lahy sy ny zandriko vavy iray izao niala tamin’ny fahamarinana. Enga anie ry zareo mba hanahaka ny modely nomena azy ihany, any aoriana any.
Tianay be ny nitaiza azy roa vavy, ary niara-nanao zavatra foana izahay. Nipetraka tany akaikin’i Aspen, any Colorado izahay. Betsaka toerana filalaovana ski any, dia nianatra nilalao ski izahay. Afaka nifampiresaka tsara izahay tamin’izany sady niala voly. Nandeha nilasy koa izahay, ka nahafinaritra anay erỳ ny niresadresaka sady nitanina afo. Mbola kely ry zareo tamin’izany, nefa nanontany anay hoe: “Inona izao no hataoko rehefa lehibe aho?” Na hoe: “Olona hoatran’ny ahoana no mba tsara ho vadiko?” Niezaka mafy izahay nampianatra azy ireo ho tia ny fitsipik’i Jehovah. Nampirisihinay ry zareo hoe ny fanompoana manontolo andro hatao tanjona. Noresahinay koa hoe tsara kokoa raha olona manana an’izany tanjona izany no vadiny, ary aleo tsy manambady raha mbola tanora loatra. Matetika izahay no niteny hoe: “Aza manambady raha tsy efa 23 taona, fara fahakeliny.”
Nanahaka an’ireo ray aman-dreninay izahay, ka niezaka mafy nitondra azy roa vavy nivory sy nanompo tsy tapaka. Nampiantrano mpanompo manontolo andro koa izahay. Matetika izahay no niresaka tamin’izy roa vavy hoe tena tianay ny asa misionera. Nolazainay taminy hoe tianay raha mba miaraka mankany Afrika izahay, ary tian-dry zareo koa izany.
Nanao fianaram-pianakaviana foana izahay. Nataonay ny zavatra mety hitranga any am-pianarana. Mody natao hoe misy mametraka fanontaniana, dia izy roa vavy no namaly. Tian-dry zareo be ilay izy sady nanampy azy hatoky tena. Rehefa nihalehibebe anefa ry zareo, dia lasa nidongy tsy nety nanao fianaram-pianakaviana indraindray. Sosotra aho indray mandeha, dia nasaiko nankany amin’ny efitranony ry zareo ary nilazako fa tsy hianatra izahay. Taitra be ry zareo dia nitomany sady niteny hoe aleo ihany mianatra. Tamin’izay izahay mivady no nahatsapa hoe tena nampianatra ny zanakay ho tia mianatra momba an’i Jehovah. Lasa tian’izy roa ilay fianarana, ary navelanay hilaza ny heviny foana ry zareo. Nilaza zavatra mifanohitra amin’izay lazain’ny Baiboly ry zareo indraindray. Tsy mora taminay izany, nefa nahalalanay izay tena tao am-pony, ka afaka nampisaintsaina an-dry zareo izahay. Rehefa fantany avy eo ny fomba fihevitr’i Jehovah dia nekeny.
Tsy hitahita akory dia lehibe izy roa vavy! Nanao izay vitanay izahay mba hahatonga azy ireo ho tia an’i Jehovah. Nanampy anay koa ny fandaminana. Faly erỳ izahay fa nanao mpisava lalana izy roa vavy, rehefa vita ny fianarany teny amin’ny lise. Nianatra asa koa ry zareo mba hahafahany hamelon-tena. Nanitatra tany Cleveland, any Tennessee, izy roa vavy tatỳ aoriana. Nalahelo an-dry zareo izahay, nefa faly koa hoe nampiasa ny fiainany izy roa mba hanompoana manontolo andro. Nanao mpisava lalana indray izaho sy Bethel, dia nahazo tombontsoa hafa. Lasa mpiandraikitra ny faritra sy vondrom-paritra mpisolo toerana aho.
Nankany Londres, any Angletera, izy roa vavy talohan’ny nifindrany tany Tennessee. Nitsidika ny biraon’ny sampana tany ry zareo. Mbola 19 taona i Stephany tamin’izay, ary nihaona tamin’i Paul Norton, tovolahy Betelita. Nihaona tamin’i Brian Llewellyn, Betelita mpiara-miasa tamin’i Paul, i Kimberly rehefa niverina tany ry zareo tatỳ aoriana. Nivady i Paul sy Stephany tatỳ aoriana. Efa feno 23 taona i Stephany tamin’izay. Nivady koa i Brian sy Kimberly, herintaona taorian’izay, tamin’i Kimberly 25 taona. Tsy nanambady tokoa izy roa vavy raha tsy feno 23 taona. Faly be izahay fa nanao safidy tsara ry zareo.
Niaraka tamin’​i Paul, Stephany, Kimberly, ary Brian, tany amin’​ny biraon’​ny sampan’​i Malawi, tamin’​ny 2002
Nilaza izy roa vavy fa nanampy azy ny modely nomenay sy nomen’ny bebe sy dadabeny, ka nahavita nanao loha laharana an’ilay Fanjakana ry zareo na dia rehefa tsy nanam-bola aza. (Mat. 6:33) Nasaina nanatrika ny Sekolin’i Gileada, kilasy faha-105, i Paul sy Stephany tamin’ny Aprily 1998. Voatendry ho any Malawi, any Afrika, izy ireo taorian’izay. I Brian sy Kimberly indray nasaina nanompo tao amin’ny Betelan’i Londres tamin’izay. Nafindra tany amin’ny Betelan’i Malawi izy ireo tatỳ aoriana. Faly be izahay mivady satria izany no fomba tsara indrindra azon’ny tanora ampiasana ny fiainany.
FANASANA HAFA TSY NAMPOIZINA
Niantso an’ahy ny Rahalahy Marais, tamin’ny Janoary 2001. Io ilay notantaraiko terỳ aloha. Mpiandraikitra ny Sampan-draharaha Foiben’ny Fandikan-teny izy. Nilaza izy fa tian’ny fandaminana hampiofanina hahay teny anglisy tsara ny mpandika teny eran-tany. Anisan’ireo noeritreretin’izy ireo hampianatra azy ireo, hono, aho ka tiany hiofana. Izaho amin’io efa 64 taona. Nivavaka momba an’izany izahay sy Bethel, dia nanontany ny hevitr’i Mama sy ny maman’i Bethel. Efa be taona ry zareo nefa navelany handeha izahay, na dia tsy ho afaka hikarakara an-dry zareo intsony aza. Niantso an’ny Rahalahy Marais aho avy eo, ary nilaza fa faly be izahay hanao an’ilay fiofanana.
Hita hoe voan’ny kansera i Mama taorian’izay. Niteny taminy àry aho hoe tsy handeha indray izahay, fa hikarakara azy miaraka amin’i Linda, anabaviko. Hoy anefa izy: “Vao mainka aho harary raha mijanona ianareo.” Nitovy hevitra taminy i Linda. Tena nahafoy tena ry zareo, ary nanampy koa ny mpiara-manompo teo an-toerana. Tena nankasitrahanay ny nataon-dry zareo. Nankany amin’ny Foibem-pampianaran’ny Tilikambo Fiambenana any Patterson àry izahay. Indrisy anefa fa ny ampitson’iny, dia niantso anay i Linda hoe maty i Mama. Nifantoka tamin’ilay asanay izahay. Izany mantsy no tian’i Mama hataonay.
Faly be izahay fa tany amin’ny sampan’i Malawi no voalohany nanendrena anay. Tany mantsy izy roa vavy sy ny vadiny, ka tafaraka indray izahay mianakavy! Nampianatra tany Zimbabwe sy Zambia izahay avy eo. Rehefa avy nampianatra nandritra ny telo taona sy tapany izahay, dia nangatahina hiverina tany Malawi mba hanoratra ny tantaran’ireo Vavolombelona tany. Nenjehina mantsy izy ireo satria tsy nety nanao politika. *
Mitory miaraka amin’​ny zafikelinay
Nody teto Basalt, eto Colorado, izahay tamin’ny 2005, dia nalahelo be indray. Mbola mpisava lalana izahay sy Bethel. Niteraka roa vavy atao hoe Mackenzie sy Elizabeth i Brian sy Kimberly, ary nifindra tetỳ akaikinay tamin’ny 2006. Mbola any Malawi kosa ry Stephany, ary anisan’ny Komitin’ny Sampana i Paul. Efa ho 80 taona aho izao. Tiako be ny mahita an’ireo tanora niara-niasa tamiko miantsoroka ny andraikitra nataoko taloha. Te hanampy ny zanakay sy zafikelinay izahay, ka miezaka mafy foana mba hanahaka an’ireo modely hitanay. Sambatra izahay manao an’izany.
^ feh. 5 Jereo Ny Tilikambo Fiambenana (frantsay) 15 Septambra 1956, pejy 275-276, sy ny 1 Aprily 1972, pejy 216-220. Resahina ao ny tantaran’ny fianakavian-dry Steele, tamin’izy ireo misionera.
^ feh. 30 Jereo, ohatra, ny tantaram-piainan’i Trophim Nsomba, ao amin’ny Tilikambo Fiambenana 15 Aprily 2015, pejy 14-18.
TANTARAM-PIAINANA Niezaka Nanahaka An’​ireo Modely Tsara Aho
“Aza Hadinoina ny Fitiavana Mandray Vahiny”
Manompo any Amin’​ny Fiangonana Miteny Vahiny ve Ianao?
Miezaha Hanana “Fahendrena” Foana
Tena Mino ny Fampanantenan’​i Jehovah ve Ianao?
Asehoy hoe Tena Mino ny Fampanantenan’​i Jehovah Ianao
Soratra Fandikana boky NY TILIKAMBO FIAMBENANA—FIANARANA Oktobra 2016
Raki-peo Fandikana raki-peo NY TILIKAMBO FIAMBENANA—FIANARANA Oktobra 2016
NY TILIKAMBO FIAMBENANA—FIANARANA Oktobra 2016